सात सन्तानकी आमाद्वारा छोराको साथीसँग विवाह ! | Janakhabar
सात सन्तानकी आमाद्वारा छोराको साथीसँग विवाह !
काठमाडौँ । बेलायतमा एक सात सन्तानकी आमाले छोराको साथीसंग विवाह गरेकि छिन् । केटाको उमेर १९ बर्षको भएको बताइएको छ । महिला र केटाको उमेरको फरक २९ वर्षको छ । अहिले उनीहरुको विवाह भएको १२ वर्ष भइसकेको छ । उनीहरु आफ्नो १२ औं विवाहको वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन्। ती महिलाको नाम मेरीलिन बुटिगीग हो, जो अहिले ६० बर्षकी भईसकेकी छिन्। ती महिलाले दोस्रो पटक विलियम स्मिथसँग विवाह गरेकी हुन् । स्मिथ अहिले ३१ बर्षको भएका छन् ।
मेरीलिनको पहिलो भेट स्मिथ संग १६ वर्षको उमेरमा भएको थियो । मेरीलिनका छोरा विलियम स्मिथको सबैभन्दा मिल्ने साथी थिए । उनको छोराले २००६ मा स्मिथलाई आफ्नो घर ल्याएका थिए । विलियम प्राय मेरिलिनको घरमा भिडियो गेम खेल्न आउँथे। बिस्तारै, महिला र विलियमको बीच निकटता बढ्न थाल्यो। त्यसपछि केहि दिन पछि दुई बीच प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो। पछि यो जोडीले अप्रिल २००९ मा विवाह गरे। तर, उनीहरुको विवाह विरुद्ध दुबै पक्षका परिवारहरु थिए । विवाह पछि, दम्पतीले आफ्ना धेरै साथीहरु र आफन्तहरु गुमाए। तर मेरीलिन र विलियम एक अर्कालाई माया गर्थे ।
मेरीलिन भन्छिन् ‘कि विलियम र म अझै प्रेममा छौं। हामी कहिल्यै अलग छैनौं र यदि हामी कहिल्यै छौं, हामी एक अर्कालाई धेरै याद गर्छौं। उनी मेरो मुटुमा छिन्। उनले भनिन, पछिल्लो केहि बर्षहरुमा, हामीले धेरै कुराहरु सुनेका छौं। जनताको गाली सुने। तर हामी अझै सँगै छौं, किनकि हामी एक अर्काको भावनाहरु बुझ्दछौं।’ मेरीलिन एक सानो व्यवसाय चलाउँछिन्, विलियम एक फिल्म निर्माता हुन । विलियम भन्छन्म, ‘मलाई थाहा छ कि हामी बीच केही विशेष छ। उनी मेरो सपनाकी महिला थिइन् र अहिले पनि छिन्।’
विलियमले भने, ‘कहिलेकाहीँ उनीलाई घरको काममा मद्दत गर्दछु ।’ मेरीलिन सात सन्तानकी आमा हुन्। तर उनले विलियमसँग विवाह गर्न सबै छोडिन्। मेरीलिन भन्छिन् , ‘हामीहरु अरु बच्चाहरु चाहँदैनौं, तर यदि विलियम परिवार चाहन्छन्त भने म सहमत छु।’ – एजेन्सी
जापानका दुई जुम्ल्याहा दिदीबहिनी विश्वकै सबैभन्दा जेठाे !
स्कुले बालकको खातामा ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जम्मा भएपछि…
चम्चाले सुरुङ खनेर ६ कैदी फरार !
जन्मदा २१२ ग्राम तौल भएकी बालिका १३ महिनापछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज